How kuti mari iri kuwa Bitcoin - Tray News - Blockchain News
How kuti mari iri kuwa Bitcoin
Pamwechete muzvinashawo tinonzwisisa sei kuwana kana mari bitcoin inorasika nokushandisa neramangwana.
Maererano CoinMarketCap, bitcoin pakutanga rwizi $ 10,000 mucherechedzo pana November 28, 2017. kubvira ipapo, muna miviri pfupi mwedzi, mutengo kwaro kaviri $ 20,000 uye vakadzokera shure $ 10,000.
99% vanhu aitenga BitCoins kuwana pamusoro payo chete kana mutengo crypto mari iri kuwedzera. Unogona kuwana pamusoro kuwa nokushandisa bitcoin neramangwana. asi, zvinosuruvarisa, neramangwana riri CBOE uye CME exchanges havasi zviwanikwe vanhuwo yokuisira pamusoro BitCoins nokuda kwavo kudhura. saka, mumwe mujenya pamusoro CBOE Exchange akaenzana imwe bitcoin, uye kukura rimwe chibvumirano pamusoro CME Exchange akaenzana BitCoins shanu. ndiko, nokuti vanotengesa pamusoro exchanges izvi unofanira kuva mashoma dhipoziti pamusoro $ 10,000. Asi pane nzira yokubuda vatengesi diki.
The Chicago Mercantile Exchange CME anoshandisa yakarongerwa bitcoin maindex kuziva kuurayiwa mutengo neramangwana zvibvumirano pazuva kuregedza kushanda. Musiki uye anotarisira indices izvi hakusi CME pachayo, asi ayo nemumwe ndiye London kambani Crypto Facilities Ltd.
Chii Crypto Facilities (CF)
Crypto Facilities chinhu crypto Exchange kuti iri muLondon uye rinonyoreswa pamwe Financial Mufambiro Authority.
ndiko, iri kambani vane mabasa nokudzorwa supervisory simba zvikuru vanoremekedzwa nevatongi munyika, uye haasi masanga kuti kwakadaro shato zvemari sezvo Chicago Mercantile Exchange CME akasarudza ichi kambani sezvo mumwe wayo vomurova bitcoin neramangwana.
The creators iyi crypto-mukutsinhana ndivo vaimbova pamusoro mamaneja yokutungamirira mabhanga zvenyika: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas uye Societe generale.
The CF zvokutengeserana pachikuva akatanga basa makore matatu apfuura: mu 2015, bitcoin neramangwana vakanga kwakatangwa pano. ndokubva, mu kuwa 2016, ari CF Exchange vatanga neramangwana nokuda Ripple XRP. In November 2016, vaishanda pamwe Chicago Stock Exchange CME, maindex nokuti bitcoin vakanga kwakatangwa.
Sezvo kushanda Crypto Facilities neramangwana kuti Bitcoin uye Ripple uye kusvikira munguva ichangopfuura aizviti kukosha zvibvumirano pano yakanga prohibitive kuti vatengesi diki: 1 BTC uye 10,000 XRP, zvichienderana zvakadaro.
Uye zvitatu chete ago, musi October 29, 2017, ari CF Exchange akatendeukira chiso kukosha zvibvumirano uye akaita neramangwana ayo inversion: zvino chiso kukosha zvibvumirano ndiyo dhora rimwe chete, i.e. Zvino unogona uvhure neramangwana chinzvimbo ane mashoma dhipoziti pamusoro $ 1
Zvireruke uye Turbo neramangwana
Trading musi CF riri shoma: bitcoin uye ripple neramangwana vane 6-mudanga zvireruke.
Nokuti chinonyanya apererwa vatengesi zvinopiwa Turbo neramangwana kuti bitcoin ane 50-mudanga papfudzi. Nemamwe mashoko, kuvhura chinzvimbo 1 bitcoin, iwe chete vanofanira dhipoziti chete 0.02 BitCoins. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kaviri uwandu bheji rako kana mutengo bitcoin Kuchinja kune divi yako chete 2%. Kana kurasikirwa uwandu bhidha yako kana mutengo anoenda 2% nenzira isiri.
Ehe saizvozvo, ichi chinhu zvakanyanyisa nezvechisarudzo. Saizvozvo, unogona kuita chero kukura bheji, kubvira $ 1 uye kusvikira 6 nguva ukuru dhipoziti yako zvavo ramangwana uye kusvikira 50 nguva dhipoziti mari nokuda Turbo ramangwana.
To dating, ari CF Exchange ane 4 marudzi neramangwana zvibvumirano:
– Neramangwana kuti vakaroorana bitcoin emadhora ane 6-mudanga papfudzi;
– Turbo-neramangwana kuti vawane BitCoins-emadhora vane 50-mudanga papfudzi;
– Neramangwana kuti vawane ripple emadhora ane 6-mudanga papfudzi;
– Neramangwana kuti vawane ripple BitCoins ane 6-mudanga papfudzi.
Pakazosvika musi wazvinenge, neramangwana pavhiki vari rakapa mumwe uye vhiki mbiri, uye Quarterly neramangwana mumwe maviri kumativi.
neramangwana ugari: kuregedza kushanda ndepana 16:00 GMT neChishanu, kuuraya rinoitwa pa 18:00 kubudikidza pakuverenga musiyano yokutanga mutengo chinzvimbo uye kukosha kugarwa indekisi musi expiry zuva. Trade chiri kuitwa kumativi wachi iri 24/7 rudzi.
Kutanga kutengesa, unofanira kuziva nhoroondo achibatsirwa chinozivisa magwaro, uyewo zvakaitika muedzo duku nezivo zviridzwa mari rinobva.
Deposit kuti Stock Exchange chinogona kuitwa chete vaviri crypto-mari: bitcoin uye ripple; Fiat mari hadzina kugamuchirwa.
Kusiyana nemimwe crypto-exchanges, Crypto Facilities haashandisi munhu chete nevakawanda chikwama kuti vatengi zvose. Mumwe munhu anoda kubetserwa ane yoga nomumwe kero iri Bitcoin uye Ripple Network, uye deposits dzenyu zvinochengeterwa pamusoro chando wallets.
Heunoi muenzaniso chaiwo sei mumwe nomumwe wenyu anogona kuita mari chikoro bitcoin:
On January 29, pfupi chinzvimbo $ 500 yakavhurwa: pavhiki-refu Turbo neramangwana akatengeswa $ 11,143.
pashure 2 mazuva ano neramangwana akatorwa iri $ 9,414 uye kuitika mubereko kuti chinzvimbo ichi ndicho 0.0056 BitCoins ($ 55.7).
Profit kana Kurasikirwa muna Base Currency = (1 / Hwamangwana Entry Price – 1 / Hwamangwana Exit Price) * Position Size
The kuderera bitcoin kwakanga = 11,143 – 9914 = 1229 kana 11%.
The mubereko yaiva = 55.7 / 500 = 11.1%.
saka, kwenguva pfupi purofiti ndanyarara hangu kurasikirwa kubva donhwe mari bitcoin, apo mune kutengeserana uku zvireruke (zvireruke) pamusoro 0.5 raishandiswa, ndiko, hafu dhipoziti saizi kana 1/100 of vaifanira zvikwanisike 50-muchirugu zvireruke.
Nokuti vaya vanoda kuchinjanisa pamusoro Cryptocurrencies rates ine papfudzi kusvikira 1:500 uye 19 Cryptocurrency maviri, tinoratidza LIBERTEX